Impi yesilawuli kude | Kusuka kuLinux
Impi phakathi Argentina y Brasil yokuphoqa eyakhe isofthiwe for the I-Interactive Digital TV, ngokusho kwephephandaba elisemthethweni iPágina / 12.
Injani i- Ginga Wase-Argentina ovela eBrazil? Ukubheja kwe-Argentina kusoftware yamahhala, kanti enye isebenzisa izinto ezivaliwe. U-O'Globo, u-Oracle noTotvs, befuna ubukhosi.
IGinga ukunyakaza okuyisisekelo kwe-capoeira, umdanso waseBrazil, ohlose ukukhohlisa isitha, okwenza ukuba kuhlaselwe futhi kunikeze i-capoeirista ithuba lokuphikisana nokusebenza kahle. Kufana nalokhu: I-Argentina neBrazil benza iminyakazo yabo ye-ginga yokulawula isoftware esebenzisa ama-decoder wethelevishini yedijithali. Isoftware yeGinga.ar isivele ifakiwe kuma-decoder ayisigidi ahanjiswa nguhulumeni wase-Argentina futhi isizokwamukelwa yiVenezuela namanye amazwe esifundeni. Isilawuli seGinga - ngokusemthethweni i-middleware - ivumela ithelevishini ukuthi iziphathe kahle futhi "ikhulume" nge-Intanethi. Ngaphandle kweGinga, ithelevishini yedijithali imane nje iyisamukeli sesiginali.
Kepha abalwi ukuze banqobe le mpi –ukuze babone ukuthi ngubani ongadansa kangcono–, kepha kunalokho babhekene namasiko amabili. I-Argentina, eyanyuselwa nguMnyango Wezokuhlela, yathuthukiswa njenge-software yamahhala, kanti inguqulo lapho imboni yaseBrazil ibheja khona no-O'Globo noTotvs ekhanda isebenzisa ingxenye yeJava, isoftware evaliwe ye-Oracle. Futhi kubalulekile? Kubalulekile. Ngabe inkampani eyodwa ingafuna yini ilungelo lokusingatha okwenzeka phakathi kwethelevishini ne-Intanethi? Yebo, njengommeleli, ingakwazi. Amasu wokuzibophezela abelokhu ekhukhula imakethe ye-software kusukela ekuqaleni kwawo-90. “Kepha ngaphezu kwezingqinamba zemibono okufanele ukuthi uGinga abe yisoftware yamahhala, ukuthi kufanele iguquke futhi nezinkampani zesoftware noma zabezindaba kufanele zizwane nayo. Kufanele bakwazi ukuthuthuka futhi bayisebenzise, ​​ukuthi ngomkhiqizo ovaliwe kunzima kakhulu. Besifuna ukutshala umkhawulo wobuchwepheshe. Sakha ipulatifomu yobuchwepheshe obuncane ongakhula kuyo. Indlela engcono kakhulu yokuthi kwenzeke lokho ukuthi ibe yisoftware yamahhala, ”kusho uGabriel Baum ophethe i-Lifia laboratory eNational University yaseLa Plata kanye naku-Ginga.ar.
Futhi kuthiwani uma leyo software yayingekho mahhala? Kubuzwa uBaum. “Ukube bekungenjalo, ubukhosi bungabalekela nakanjani. Uma ukusebenzisana kuba yinto enenzuzo kuthelevishini, noma ngubani ophethe ubuchwepheshe uzobeka izimo ezimakethe zokunquma okufanele akwenze nokungafanele akwenze. Njengakho konke ukuzalwa kwezobuchwepheshe, othile uthatha ubuchwepheshe bese ebeka ijubane. Umbuso ungathatha izintambo kodwa akunangqondo. Lokhu kuzoba yingxenye yezokuxhumana futhi akuyona into engaphansi kokufuna ukuphoqelela ubukhosi ngokwezobuchwepheshe bezokuxhumana, ”kuphendula uBaum, enikina ikhanda lakhe njengomuntu odansa icapoeira.
Izinkampani ezingama-Brazilian tandem zaphuma zizogxeka isinqumo sikahulumeni wase-Argentina sokuthenga imishini yamathenda ngaphansi kwezinga le-Ginga-NCL elenziwe e-Lifia naseTeleMídia laboratories (i-PUC / Rio, eBrazil), lapho kwaqala khona lo msebenzi. Ukubheja okunamandla kwe-O'Globo, okuphatha amaphesenti angama-75 ebhizinisi lethelevishini, kungukulawula le divayisi ukuthi ibe ngumqhudelwano womhlaba wonke: ngomqhudelwano womhlaba kanye nama-Olimpiki, iBrazil izoba maphakathi nendawo yabezindaba . Lokhu kuholele ekutheni uGabriel Baum waseLifia noLuis Fernando Gomes Soares baseTelemidia benze isitatimende ngokuhlanganyela sokuphika ukuthi iGinga.ar "ibiya ngaphandle kokujwayelekile", njengoba abaphathi beTotvs bememezele ezinkundleni zamazwe.
Ngasohlangothini lweGinga.ar, kulindeleke ukuthi inqwaba elandelayo yama-netbook ohlelo lweConectar Igualdad isatshalaliswe nabemukeli bethelevishini bedijithali. Uhulumeni waseVenezuela usezowusebenzisa, ngoba ngokomthetho abakwazi ukusebenzisa isoftware yangasese. UChávez uzothenga abaguquleli bedijithali abayizinkulungwane ezingama-300 neziteshi zethelevishini zedijithali eziyishumi nantathu ezivela e-Argentina ngenani lamadola ayizigidi ezingama-51, aqale afinyelele kumaphesenti angama-25 abantu. Okuqukethwe kwedijithali okuvela eBacua (Banco Audiovisual de Contenidos Universales Argentino) nakho kuzothathwa futhi ukwakhiwa kwesicelo esisodwa noma ezimbili zeGinga ezindabeni zikahulumeni ngogesi kusazocaciswa, ngokusho kukaBaum. Isivumelwano saphothulwa emhlanganweni omkhulu wePatria Grande Conectada, owawuseTecnópolis ngesonto eledlule. I-Ecuador, i-Uruguay neChile nabo bakhombise intshisekelo kuhlobo lwase-Argentina futhi nentuthuko yendawo iyaqhubeka nokuthuthuka. Ngaphezu kweLa Plata, ama-laboratories ezobuchwepheshe eBahía Blanca, Tandil, UTN, San Martín, UBA, 3 de Febrero naseRío Cuarto, phakathi kwabanye, nawo ayabandakanyeka.
IGingaJ, inguqulo eyakhiwe eJava, ivumela i-Oracle ukuthi ikhokhise amalayisense, "kodwa lokho akukubi kakhulu," kusho uBaum. “EBrazil, ngemuva kokwenza uphenyo oluningi kwezemfundo, bathole ukuthi izimo ezibekwa yi-Oracle ngeGingaJ zifana nezebhubesi. Noma ngubani owenza intuthuko kwiGingaJ kuzofanele anikeze ikhodi ku-Oracle ngaphambi kokuyifaka. Abantu baseParaíba ababethule izicelo zeGingaJ bahlehla ngoba baqala ukubona ukuthi ukuphrinta okuhle kubenza bathembele, ”kusho uBaum. Ukuhamba kweTopvs, i-software enkulu yaseBrazil, ukuncintisana umhlaba wonke nabadlali abakhulu abanjengoGoogleTV noma i-AppleTV futhi babheja emphakathini wabathuthukisi beJava cishe abantu abayizinkulungwane eziyi-140 emhlabeni jikelele. Kodwa i-Oracle, i-O'Globo ne-Topvs alliance nayo isekelwa imboni yezobuchwepheshe yaseBrazil, eqale ukubheja iGingaJ yayo uqobo engcupheni yokungakwazi ukuthumela amadivayisi ayo e-elekthronikhi kulo lonke elaseLatin America. Esinye isinyathelo esincane se-capoeira.
Umthombo: IPágina / 12
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » Impi yesilawuli kude
Manje ukhumbule i-Free Software… ..? manje, ngemuva kokusabalalisa izigidi zama-netbook ngamawindi !!!
iphuzu elihle kakhulu.
Noma kunjalo, lokho akusho ukuthi, uma kunjalo, kuyindlela engcono kakhulu.
amawindows netbook ayihlazo. Ngingalokotha futhi ngithi ngimelene nohlelo lokuxhuma ukulingana. Ngicabanga ukuthi ngibhale i-athikili ngale ndaba. Hug! UPaul.
Isoftware yamahhala !!!!
U-Alfredo Gore kusho
Ngiyethemba ukuthi lokhu ngeke kungene emlandweni njengenye yezinto ezinhle i-Argentina ebingazenza futhi zaze zaba yize, lapha kufanele utshale ifulegi futhi ukubhange lokhu kuze kube sekufeni, ngoba awukwazi ukunika abezindaba ukulawula ezinkampanini ezifana I-Oracle.
Phendula u-Alfredo Gore
URodrigo kataishi kusho
zine-linux ... (indala impela, kepha zine ...)
Ngisacabanga ukuthi ukusho ukuthi uhlelo lubi ngoba lunebhuthi ekabili enamawindi kuncane kakhulu.
Phendula uRodrigo Kataishi
Cha, akungenxa nje yalokho. Empeleni, mhlawumbe leyo yinto "encane" ngokubona kwami. Ngabelana nomqondo kaStallman wokuthi lolu uhlelo "lokuxhuma ukungalingani" (lwe-boot ebili nakho konke lokho). Kodwa-ke, ngicabanga ukuthi kunezinye izizathu zokuthi kungani lolu hlelo lungasebenzi.
Ukunikezela ngama-netbook njengamateku akusizi ekuvaleni ukwahlukana kwedijithali. Ngiyakukholwa ngobuqotho. Uma ukhipha i-drill kodwa ungafundisi ukuthi ungayisebenzisa kanjani, ngeke ikwenze. Ngaphezu kwalokho, kujulisa ipolitiki yedavida. Nginesiqiniseko esikhulu, njengoba "okungalungile kwezepolitiki" kungabonakala kulezi zinsuku, ukuthi indlela engcono kakhulu yokusondeza izingane ekhompyutheni isesikoleni, emtatsheni wezincwadi, njalonjalo. Ngamanye amagama, ngendlela yendabuko. Esikhundleni sokuchitha isigidi sesiliva kuma-netbook, bengizokusebenzisa ekuthuthukiseni izikole, ekuqeqesheni othisha, ekwakheni amakamelo anamuhla amakhompyutha, njll.
Ngaphezu kwalokho, njengoba behambisa ama-netbook amahhala, bafaka intela ezintweni zamakhompyutha (ukuvikela imboni yezwe), okwenza kubize kakhulu.
KONKE lokhu, ingasaphathwa eyebhizinisi elihle kakhulu elenzeka kulezi zinhlelo zokuhlalisana. Yebo, ama-netbook awawi esibhakabhakeni.
Kuyathakazelisa ukuthi basebenzisa igama elithi "Ginga", iso uCapoeira ukubonakaliswa kwamasiko eBrazil, okubandakanya iDance, ukulwa nomculo, ngibheja kwiFree Software!
Lokhu okushoyo kuyahlekisa, noma mhlawumbe wena noma umuntu odlula lapha ufunde i-linux esikoleni. Ngifunde ukusebenzisa i-computer ekhaya ngokufaka nokuqhekeza imidlalo, hhayi esikoleni.
Futhi kungani bebengeke babe namawindi? Awunayo ibhuthini ekabili?
Kungani udala amakamelo ekhompyutha uma ungaba namakhompyutha 24/7?
Futhi maqondana nalaba bokugcina ... Leyo inguqulo yabangenisi, ngishiye nohlobo losomabhizinisi abafaka imali yokuthuthuka ezweni.
1) Bheka, ngifunde ukusebenzisa imidlalo ekhaya nasezindaweni zamahhovisi (kahle, nginama-macros ku-vb namanye) esikoleni.
Ngifunde ukwenza uhlelo ngokubuka umfowethu.
2) Kungani kungenjalo iWindows? Ngoba kuwukuchitha imali ngamalayisense. Ngaphezu kwalokho, "ufundisa" izingane ukuthi zisebenzise umkhiqizo, ngaphandle kokuthola ukungalungi okuyinkulungwane, ongakhiqizwa e-Argentina, yisoftware ephathelene, i-guita ithathwa ngomunye wamazwe omhlaba obonakala ungawuthandi ( nami) futhi, sengathi lokho akwanele, bayingxenye yoMbuso. Ngamafuphi, ayinayo inzuzo eyodwa. Ingane efunda ukusebenzisa iLinux ingaphatha ukufunda iWindows kalula uma kungenzeka idinge ngesikhathi esithile.
I-3) Akufakazelwa ndawo (hhayi e-Argentina kuphela) ukuthi izinhlelo zokusatshalaliswa kwe-netbook zinciphisa ukwehlukana kwedijithali futhi zenze ngcono ukufakwa komphakathi. Okwaziwayo ukuthi lilibhizinisi elihle kakhulu ezinkampanini ezikhiqiza la ma-netbook.
4) Ingxenye enkulu yothisha ayitholanga ukuqeqeshwa okwanele, ngakho-ke izingane zisebenzisa ikhompyutha ukwenza noma yini ngaphandle kokufunda. Udinga umhlahlandlela, yilokho kuphela engikushoyo.
5) Mayelana nalokhu kwamuva, ngifuna nokuvikela imboni kazwelonke,
kepha kubonakala kimi ukuthi kunezinye izindlela. Futhi, uma ufuna ukufaka okuningi
abantu ukuze bakwazi ukufinyelela kwikhompyutha, leyo akuyona indlela engcono kakhulu
(kukhuphuka amanani)… uyangiqonda?
Ngiyaqonda ukuthi "ngaphezulu" kubukeka njengesilinganiso esihle, kepha lapho i-
uhlaziya ngokuningiliziwe inani lesiliva elitshaliwe alinikezi
imiphumela kufanele. Ngo-2012, kuhlelwe izigidi ezingama- $ 3.223
wokusatshalaliswa kwe-netbook. Unombono wezinto KAKHULU
izinto ezibalulekile nezinamasu ezingenziwa ngaleyo mali? Akunjalo mayelana
ukuthi banayo yini i-netbook noma cha kodwa banalo i-QUALITY yemfundo
ukuthi izingane zithola. Futhi lokho kubonakala kungathuthuki ngama-netbook.
Ah! Ngenhlanhla, angikadingi iWindows iminyaka. Cha, anginayo i-dual-boot.
Anginayo i-Dual boot (empeleni yebo, kepha zonke izinketho ziyi-linux) futhi angisebenzisi windows nhlobo futhi i-PC yami isebenza ngokuphelele. Manje kungani isihlangu sinamabhuku wabafana anamawindi ??? futhi ngisekela uPablo noStallman ukuthi uhlelo kumele lubizwe ngokuthi XHUMANA UKUNGALINGANI noma XHUMANA UKUNGALINGANI njengoba uR Stallman asho ngoSepthemba odlule emtatsheni wezincwadi kazwelonke.
Banamawindi (ne-linux) ngoba ukuze babe nokulingana kufanele bakwazi ukukhetha, njengoba senza konke okunye esingakukhokhela amakhompyutha ethu.
2) Ukuvikela kwami ​​amawindi kudlula egameni elithi "ukulingana", ukuze lawo ma-PC anikeze ukulingana, labo abasebenzisa ama-netbook kumele babe nezinketho ezifanayo nezethu sonke.
3) Kimi, ukwahlukana kwedijithali ukungafinyeleli kubuchwepheshe, akukho okunye. Ngale ndawo (yami) yokubuka (ayihlukile kakhulu kulokho okushiwo yi-wikipedia), ebanikeza ukufinyelela kwi-netbook, igebe lincipha ngokuzenzekelayo.
Angazi ukuthi likhulu kangakanani ibhizinisi. Ama-netbook akhiqizwa ezweni futhi ngicabanga ukuthi kuhle ukuthi labo abatshala imali ezweni banqobe.
4) Udaba lothisha luyingxoxo okwesikhashana, ngoba kimi (iningi) bayingxenye yenkinga. Ngakho-ke kubonakala kimi kukuhle ukuthi abafundi akudingeki bancike kuthisha ukuze bakwazi ukufinyelela kwi-PC.
Engikushoyo ukuthi izingane sezivele zivele zifunde nje ukusebenzisa i-PC ngaphandle kwanoma ngubani obatshela ukuthi bangenzani futhi bangenzani.
5) Ukukhuphuka kwentengo kuyahlekisa futhi inzuzo embonini kazwelonke inkulu kakhulu. Futhi kubonakala kimi ukuthi lapha sesivele sikhuluma ngemodeli yezwe, uma sifuna imboni, ivikelekile kanjalo, kungisizani mina ukuthi izinto zishibhile uma ngingeke ngikwazi ukuzithenga ngoba anginazo umsebenzi?
Izindaba ezifuna ukwazi lapho iBrazil inenqubomgomo ye-Free Software esebenzayo. Kufanele kube yindaba yokuxhaswa.
bueh .. ngaleyo nqubo kuzodingeka ize ne-OS X, BSD ... njll
Ngizijwayeza uCapoeira, ngifunda i-Information Systems Engineering, ngihlala ngifunda Masisebenzise iLinux. Angifuni ukwengeza noma iyiphi idatha yezobuchwepheshe, kepha eyomlando, ngithole igama likaGinga lihlekisa ngoba njengoba lisuka enhlanganweni ejikayo yokukhohlisa ophikisayo, kepha iqiniso eliyisisekelo ukuthi uCapoeira uvela ebugqilini futhi wazuza inkululeko abaningi, bathi uGinga noma uCapoeira futhi bekhuluma nge-software evaliwe, abavumelani namafilosofi abo. Ngiyazi ukuthi imodeli ye-Oracle ngeyokuzibusa futhi ngaso sonke isikhathi ukwenza inzuzo kwezomnotho (ngiyakhumbula lapho ngangifuna ukwenza inkokhelo ye-OpenOffice futhi ngigcina ngiyinikela ku-Apache Foundation, ngaleyo ndlela ngakha iLibreOffice eba ngcono nsuku zonke ngenxa yomphakathi ), kepha kungaba kuhle uma iBrazil ibheja abantu bayo abasha emanyuvesi (uma kwenzeka i-Argentina ku-UTN), ifaka imali kuyo futhi isungula futhi ithuthukise isoftware yamahhala. Kungumbono wami nje othobekile.
ngiyavuma ngokuphelele! ukwanga okukhulu! UPaul
UJim Whitehurst "Intando yeningi ayihlali iyindlela enhle kunazo zonke ebhizinisini"